Maitiro ekuvharira nhamba muIOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekuvharira nhamba muIOS 9
Mubvunzo wekuti vashandisi vazhinji vatsva kuIOS uye vashandisi vane ruzivo vangangodaro vasina kumbozvibvunza ndewekuti unogona kuvharidzira nhamba pasina jailbreak. Mhinduro ndeyekuti hongu uye, nekuwedzera, kuti tidaro isu tinongofanirwa kufamba kuburikidza nekushandisa kweNhare (kubva kuContact application isu tisingazokwanise) uye ipapo tichaona sarudzo.
Izvi zvinogona, izvo inowanikwa kubva kuIOS 7, Vazhinji vashandisi vanoramba vachizviita nenzira "yakaoma", inova nekuvhura masetingi, kusarudza "foni" kana "meseji", kuenda ku "vharidzirwa mafoni" nekubata "Wedzera nyowani". Zvirinani pane izvi tinozvisiya tichingoziva kuti ndedzipi shamwari dzakavharwa tisingafanirwe kutarisa rimwe nerimwe. Maitiro ekuvharira nhamba yefoni ari nyore.
Isu tinovhura iko kunyorera Telephone.
Takatamba pa Vatengi uye sarudza wekubata iyo yatinoda kuvhara.
Tinotsvedza zvakakwana kusvikira iwe waona Vimba iyi yekuonana. Takatamba ipapo.
Muhwindo rinobuda, tinobata Bvisa kuonana.
Sezvauri kuona mune meseji, isu hatigamuchire zvakajairwa mafoni, SMS kana FaceTime, zvese vhidhiyo uye FaceTime Audio. Zvingave zvakanaka kana Apple ikatambanudzira zvese izvi kune mamwe ese maapplication kana tichida, asi ini ndinofunga izvi zvinenge zvichikumbira zvakawandisa, handiti?
Kana nekufamba kwenguva iwe uchida kuona kuti ndeapi manhamba awakavharira, unofanirwa kuenda Zvirongwa / Runhare (kana mameseji) uye tarisa pa «Yakavharidzirwa mafoni. Uye zvakare, ipapo iwe unokwanisa kuvhura imwe chete nhamba yefoni yemunhu, iyo inogona kuuya inobatsira kana iwe uchingoda chete kuvharidzira imwe nhamba yezviverengero zvine waunosangana naye.
Kana iwe ukatambira mafoni mazhinji ausingade kushevedzwa uye iwe usingade kuwedzera iwo kune ako ajenda, kurudziro yandinoita ndeyekuti iwe ugadzire kuonana senge iri mumufananidzo unotevera:
Mukubatana kumwe chete unogona kuwedzera nhare dzese dzinokunetsa zvakanyanya. Semuenzaniso, ndine mafoni mazhinji ipapo izvo chinhu chete chavanoita (kana chavakaita, chokwadi ndechekuti ini handizive) kundidaidza kuti undipe zvigadzirwa zvandisinganyatsoda uye ini handitombozvifarira. Nekuvharira nhamba yavo havazombondinetsa zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvharira nhamba muIOS 9
Iwe unoziva kuti pakati pezvimwe zvinhu ini handigone kutsanangura kana iyo foni app ichiita uye iine zvirinani zvingasarudzwa (zviripachena) pane iyo Yekubatana app, yeiyo app iripo (Contacts)
Mhoroi, mukristu. Hausiwe woga. Ini handizive kana paine vanhu vanofanirwa kuona kunyorera muchimiro cheiyo ajenda kuti vasarasika, chaizvo, asi hazvidiwe. Zvakanakisa, siya iwo Anongedzo app yeiyo iPad uye iyo Foni yeiyo iPhone.
Mitero inobata sei mitengo yeApple mune yega nyika
Yekutanga turera yeiyo yakanyorwa "Steve Jobs: Murume ari muchina"